बुधबार, जेठ ४, २०७९ ०६:००:५७ युनिकोड
यस्तो छ आज सुनचाँदीको मूल्य मंगलबार, चैत २९, २०७८
प्रतितोला रु २०० ले घट्यो सुनको मूल्य सोमबार, चैत २८, २०७८
एनसेलले ल्यायो नयाँ वर्षमा नयाँ आकर्षक अफरहरू सोमबार, चैत २८, २०७८
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य: कति छ आज ? सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको कारोबार मूल्य प्रतितोला रु एक लाख ३०० पुगेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९९ हजार ५०० मा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला रु ८०० ले बढेको हो । आइतबार, चैत २७, २०७८
सरकारले ट्याक्सीको भाडा पनि बढायो, नयाँ भाडादर यस्तो बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारीसँगै ट्याक्सीको भाडा पनि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सार्वजनिक सवारी (बस) र प्रदेशभर लागू हुने गरी ट्याक्सीको भाडा बढाएको हो । प्रदेश सरकारले पेट्रोलसँगै बिजुलीबाट चल्ने ट्याक्सीको समेत भाढा बढाएको हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने ट्याक्सीको सुरुको फ्लाग डाउन ५० रुपैयाँ कायम भएको छ । शनिबार, चैत २६, २०७८
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य: कति छ आज ? नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको भाउ तोलामा ३ सय रुपैयाँले घटेर ९८ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि मंगलबार सुन तोलाको ९८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । बुधबार, चैत २३, २०७८
आजबाट लागुहुने गरि निगमले बढायाे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कुनकाे कति पुग्याे ? (बिज्ञप्ति) नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगम संचालक समितिको बैठकले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरेर पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँको दरले बढाउने निर्णय गरेकाे हाे । बुधबार, चैत २३, २०७८
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाल सुनको भाउ तोलामा ६ सय रुपैयाँले घटेर ९८ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि, आइतबार सुन तोलाको ९९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सोमबार, चैत २१, २०७८
कलंकीस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई दुई लाख जरिवाना जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र वाणिज्य विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले कलंकीस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई दुई लाख जरिवाना गरेको छ । आइतबार गरिएको अनुगमनका क्रममा म्याद सकिएको मिरिन्डा र म्याद स्पष्ट नदेखिने सामान राखिएको पाइएपछि दुई लाख जरिवाना गरेको हो । सोमबार, चैत २१, २०७८
बढ्यो गाडीको भाडा: कुन रुटमा कति पुग्यो ? यस्तो छ विवरण सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने लामा दूरीका सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाएको छ । सरकारले १५ प्रतिशतसम्म गाडीको भाडा बढाएको हो । यात्रु बाहक सवारीको भाडा १० प्रतिशतले बढाउने यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय बैठकले निणर्य गरेको छ । सोमबार, चैत २१, २०७८
आजदेखि सबै पेट्रोल पम्प खुले, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित (बिज्ञप्ति) पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । नेपाल आयल निगम र पेट्रोलियम व्यवसायीबीच चार बुँदे सहमति भएसँगै ढुवानी व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । आइतबार, चैत २०, २०७८
आईओसीको नयाँ मूल्यसूची : १ रुपैयाँ ४८ पैसाले घटेर आयो पेट्रोलको मूल्य भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसुची पठाएको छ । अप्रिल १ तारिख (चैत १८ गते) पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार लगातार बढिरहेको पेट्रोलको मूल्य सामान्य घटेको छ । नयाँ मूल्य सूचमा पेट्रोलको मूल्य १ रुपैयाँ ४८ पैसाले घटेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको । डिजेलको मूल्य भने प्रतिलिटर दुई पैसाले बढेर आएको छ । शनिबार, चैत १९, २०७८
आज पनि ओरालो लाग्दै सुनचाँदीको भाउ नेपाली बजारमा आज पनि सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार प्रतितोला ९९ हजार २ सय रुपैयाँ कायम भएको छापावाल सुनको भाउ बुधबार ४ सय रुपैयाँले घटेर ९८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । तेजावी सुनको भाउ तोलाको ९८ लाख ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । बुधबार, चैत १६, २०७८
कुखुराको मासुको मूल्य वृद्धि ताप्लेजुङमा ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य वृद्धि भएको छ । सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा केही सातायता मासुको मूल्य प्रतिकिलोग्राम रु १०० ले वृद्धि भएको हो । फुङ्लिङ बजारमा ब्रोइलरको मासु प्रतिकिलोग्राम अहिले रु ४८० पु¥याइएको छ । सहज रूपमा ब्रोइलर कुखुरा उपलब्ध हुन छाडेकाले मासुको मूल्य वृद्धि हुँदै गएको स्थानीय व्यवसायी बताउँछन् । जिल्लाभित्र ब्रोइलर कुखुरा पाउन छोडेपछि अहिले इलाम र झापादेखि आयात गरेर मासु बिक्री गर्दै आएको उनीहरुको भनाइ छ । सोमबार, चैत १४, २०७८
वीरगञ्ज नाकाको राजस्व सङ्कलनमा उलेख्य सुधार देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्ज क्षेत्रलाई प्रयोग गरी हुने विभिन्न वस्तुको आयात निर्यात बढेसँगै भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनमा उलेख्य सुधार भएको छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा देखा परेको कोरोना भाइरसको प्रभाव कम भएसँगै देशभित्रको उद्योग व्यापारले गति लिएपछि वीरगञ्ज नाकाको आयात निर्यात वृद्धि भई राजस्व सङ्कलनमा सुधार आएको हो । बिहीबार, चैत १०, २०७८
घट्यो सुनको मूल्य सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको कारोबार मूल्य प्रतितोला रु ९९ हजार २०० तोकिएको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला रु एक लाख ३०० मा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला रु एक हजार १०० ले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९८ हजार ७०० छ । यसको मूल्य मङ्गलबार प्रतितोला रु ९९ हजार ८०० थियो । बुधबार, चैत ९, २०७८
करिव ३१ अर्बको मोबाइल फोन आठ महिनामा नेपाल भित्रियो चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो आठ महिनामा नेपालमा करिव ३१ अर्ब रुपैयाँको मोबाइल फोन सेट भित्रिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार २०७८ साउन देखि फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा ३० अर्ब ९९ करोड २१ हजार रुपैयाँको मोबाइल फोन सेट नेपाल भित्रिएको हो । बुधबार, चैत ९, २०७८
छापावाल सुनको मूल्य तोलाको एक लाख नाघ्यो सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको कारोबार मूल्य प्रतितोला रु एक लाख ३०० तोकिएको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९९ हजार ५०० मा कारोबार भएको पहेँलो धातु आज रु ८०० ले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९९ हजार ८०० छ । मंगलबार, चैत ८, २०७८
सुनको मूल्य सामान्य वृद्धिः चाँदीको स्थिर सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको कारोबार मूल्य प्रतितोला रु ३०० ले बढेर रु ९९ हजार ५०० पुगेको छ । उक्त सुन अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९९ हजार २०० मा कारोबार भएको थियोे । सोमबार, चैत ७, २०७८